विप्लव बन्द: ठाउँ-ठाउँमा बम, शैक्षिक संस्था पनि बन्द – Pahilonepalikhabar
विप्लव बन्द: ठाउँ-ठाउँमा बम, शैक्षिक संस्था पनि बन्द
प्रहरीले कार्यकर्ता हत्या गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले मंगलबार आयोजना गरेका नेपाल बन्दका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दको कारण राजधानीमा सार्वजनिक सवारी साधानहरु कमै चलेका छन् । अन्य बन्दका तुलनामा निजी सवारीसधानहरु सडकमा कम गुडेको छन् ।
उपत्यकाका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले पठनपाठन नै बन्द गरेका छन् । यसकाे मनाेवैज्ञानिक त्रास बालबालिकामा पर्न सक्ने देखिन्छ । चोक-चोक प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन देशका विभिन्न स्थानबाट विप्लव समूहले बम राखेको समाचारहरु आएका छन् । अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षाकर्मीहरु सतर्क रहेकाे जनाइएकाे छ ।
असार ५ गते सर्लाही जिल्लाका संयोजक कुमार पौडेलको प्रहरीका गोली लागि मृत्यु भएको विरोधमा सो समूहले बन्दको आह्वान गरेको छ । सरकारले दोहोरो भिडन्तमा पौडेल मारिएको र उनीसँगबाट पेस्तोल बरामत भएको जनाएको छ । तर नेकपाले पौडेललाई पक्राउ गरेपछि हत्या गरिएको जनाएको छ यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दुई टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी संसदका राज्य व्यवस्था समितिले समेत छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘१५ सय घुस खाने खरिदारलाई पक्रने, अर्बौंको भ्रष्टाचारबारे कानमा तेल हालेर बस्ने ?’: बाबुराम
pahilonepalikhabar January 3, 2019
देवचुली महोत्सवमा पशुपती शर्माले खुलेरै ‘लुट्न सके लुट’ गाउँदा यस्तो बन्यो माहोल (भिडियो)
DADA DON March 8, 2019
भोलिको नतिजाको लागि १ लाख शेयर को अपिल ! तपाइको एक शेयर ले १०० भोट आउन सक्छ
pahilonepalikhabar November 29, 2018
रेडबुल एक मन्द विष, थाहापाउनुहोस रेडबुलबाट हुने गम्भीर र प्राणघातक समस्याहरु
pahilonepalikhabar September 24, 2018
गगन थापासँग निहुँ खोज्ने केशव स्थापित मन्त्री पद खुस्किएपछि लागे गाँजाको धन्दामा !
रबिन्द्र अधिकारि सानै उमेर देखि पैसा हिनामिना गर्ने बानि भएको खुलासा
दीपाको फोटो राख्दै राष्ट्रपतिलाई दीपकको व्यङ्ग, जितुले …
11 Astonishing Advantages Of Apricot
ओलिज्यु येहि हो सुशासन? फेरि झापड खाए …
१४ वर्ष जेल बसेका केपी ओलीले कसरि …
अरुलाइ होच्याउदा १५ लाख जरिवाना र दुई …